Abavelisi baNyango-i-China iFektri yoNyango kunye nabaXhasi
Uxinzelelo kwisikhombisi soxinzelelo
✭ Inkampani yethu inamava kakhulu kwicandelo leeplastikhi zokubumba zeecatheters zonyango. Ayisiyiyo kuphela imveliso yokuvunda, kodwa kunye nenqanaba lokunyanga ngenaliti yokubumba. Izinto zeplastiki ezisetyenziswe kule catheter yonyango zibiza kakhulu kwaye zifuna ukubumba okuphezulu kakhulu. Umngxunya ongaphakathi wemveliso yi-1.27mm kuphela ububanzi. Ukufakwa kwethu kukungunda kwenziwa nge-SKH51 ekumgangatho ophezulu wezinto. Lo mbandela unokuqinisekisa ukunyamezelwa kwemingxunya encinci kunye nokuqinisekisa ubomi benkonzo yokufakelwa kwesikhonkwane.
✭ Izinto zeplastiki zale catheter zizinto ezingama-65 ezithambileyo. Ngexesha lenkqubo yenaliti yokubumba, kunzima ukudiliza. Ngokuphuculwa kwetekhnoloji, imveliso yethu yangoku ihamba kakuhle kwaye umjikelo wenaliti uyancitshiswa. Okwangoku, umjikelo wethu wenaliti yokubumba yimizuzwana eyi-16, egcina ixesha lokuhambisa kunye neendleko kubathengi bethu.
✭ Iiseti zethu zokubumba zenziwe ngezinto ezilukhuni ze-S136, kwaye ubomi bomngundo kufuneka bufike kwisigidi esinye samaxesha. Kwinkqubo yokubumba yenaliti, kufuneka kuqinisekiswe ukuchaneka kwemveliso, kwaye kuqinisekiswe ukuba izinzile kwaye iqinile ngexesha lenkqubo.
✭ Iintsuku ezisi-7 * 7 ibhokisi yeepilisi yokugcina iibhokisi ezingama-49 zokuqinisekisa ukufuma zamayeza anokuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zakho zemihla ngemihla naxa useluhambeni.Imibala yomnyama usuku ngalunye iphawulwe ngokwahlukeneyo kwisivalo ukuze ukwazi ukwahlula ngokulula into oyifunayo.Isivalo seplastikhi esomeleleyo nesomeleleyo kunye nesomeleleyo siya kuhlala siqinile logama nje usivale kwaye singasavuleki. Akukho yeza lisasazeke engozini okanye kwimpembelelo.Uyilo olwahlukileyo lwembonakalo yesilinda lusindisa indawo, ngokungafaniyo nezinye iibhokisi zepilisi eziyinxalenye yoxande, ezinokubamba izixhobo ezincinci.
✭ Umzekelo, IPilisi CUTTER.Ubukhulu be-22.5 x 6 X 27 cm Ibhokisi nganye encinci inemilinganiselo ye-1.06 intshi * 0.23 intshi * 0.86 cm, inkulu ngokwaneleyo ngokobukhulu obahlukeneyo
Le nxalenye yeplastiki yinxalenye yeefilitha zeoyile zokufakwa kweplastiki ezivela kumthengi wase-USA. Le seti yokubumba isebenzisa umgangatho we-DME. Izinto eziphambili zi-S136 intsimbi eyomeleleyo.
✭ Ubume besikhunta bulula ngokulula, kubini kufakwa izakhiwo ezingundoqo ze-Becu. Izinto ezibonakalayo zePP, kwaye umphezulu kufuneka ube yiPolish- # 600. Imfuneko yokuchaneka kwemveliso +/- 0.1. Ixesha lokuhambisa isikhunta ziintsuku ezingama-35, kwaye umjikelo wenaliti yimizuzwana engama-35. Ukubumba kwavavanywa kabini kuphela, kwaye umthengi wasicela ukuba silungiselele ukuthumela ngaphandle kumzi-mveliso wokubumba wenaliti wase-USA.